Faa'iidooyinka khamriga cas: isticmaalka dhexdhexaadka ahi wuxuu u fiican yahay caafimaadkaaga | Ragga Stylish
Ma taqaanaa waxtarka khamriga cas? In kasta oo ay tahay cabitaan khamri ah, taas oo ah sababta ay marwalba lagama maarmaanka u tahay in diirada loo saaro isticmaalkeeda si dhexdhexaad ah, cilmi baaris ayaa lagu ogaaday waxay lahaan kartaa faa'iidooyin caafimaad oo layaableh. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in cabitaankan, oo asalkiisu ka soo bilaabmay wakhtiyadii hore, uu leeyahay waxyaabo u gaar ah.
Haddii aad jeceshahay cabitaankan, saameynta wanaagsan ee noocyada kala duwan ee khamriga cas ay ku yeelan karaan jirkaaga ayaa kaa caawin doonta inaad dib u xaqiijiso doorashadaada. Iyo haddii aad doorbideyso cabitaan kale oo khamri ah, ka dib markaad aqriso faa'iidooyinka khamriga cas, waxaad ku dambayn kartaa inaad maskaxdaada bedesho. Waana in iyaga xaggooda gabagabada laga soo saaray taas waxba kuma soo kordhin karo wax ka yar cimrigaaga:
1 Cabitaan hodan ku ah antioxidants
2 Qalbiga ayey u fiicantahay
3 Waxay ka difaacdaa kansarka
4 Waxay hagaajisaa niyadda
5 Cab dhexdhexaad ah
Cabitaan hodan ku ah antioxidants
Khamriga cas wuxuu leeyahay qadar badan oo polyphenols ah. Khubaradu waxay ku adkeysanayaan muhiimadda ay leedahay in jirka la siiyo maadooyin ku habboon antioxidant-ka iyada oo loo marayo cuntada. Oo layaabna ma leh, maadaama lagu tiriyo inay awood u leeyihiin inay la dagaallamaan caabuq daba dheeraada oo ay ka caawiyaan inay unugyada jidhka ku hayaan xaalad wanaagsan.
Cunto hodan ku ah antioxidants waxay yareysaa halista cudurka. Ilaa inta khamriga cas laga hadlayo, waxay la xiriirtay ka hortagga cudurrada wadnaha, kansarka, Alzheimers ama Parkinson mahadsanidiisa heerka sare ee resveratrol
Way badan yihiin cuntooyinka antioxidant in aad ku dari karto cuntadaada, laakiin sidoo kale waxaa jira cabitaanno leh astaamahan, iyo shaaha cagaaran iyo khamriga cas ayaa shaki la’aan ah kuwa ugu fiican ee la yaqaan uguna caansan.
Qalbiga ayey u fiicantahay
Waan ognahay sida ay muhiimka u tahay daryeelka qalbiga iyo taas waxa aad ku darto cuntadaada, iyo sidoo kale waxa aad ka tagto, ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara howlaha hadda iyo mustaqbalka ee xubintan..
Khamriga cas wuxuu ka tirsan yahay cuntooyinka lagu tilmaamay inay u wanaagsan yihiin wadnaha. Sida laga soo xigtay baaritaanno kala duwan, cabitaankani wuxuu yareyn karaa halista cudurada wadnaha iyo wadnaha. Tani waa sababta oo ah isticmaalkiisu wuxuu yareyn doonaa halista xinjirowga ee yareeya socodka dhiigga iyo dhaawaca murqaha wadnaha. Marka la soo koobo, cabitaankani wuxuu kaa caawinayaa inaad ballaadhiso xididdada dhiigga, hagaajiso socodka dhiigga, iyo ka hortagga dhiig karka.
Haddii aad rabto ka ilaali kolestaroolka iyo waxyeelada waxyeelada leh, khamri cas sidoo kale wuxuu noqon karaa saaxiib aad u xiiso badan. Kolestaroolka LDL ama kolestaroolka xun wuxuu ka hortagi karaa shaqada saxda ah ee halbowlayaasha waxayna sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo daran. Laakiin cabbitaanka dhexdhexaadka ah ee khamriga cas wuxuu jidhka ku siin karaa xoogaa qalab ah oo lagula dagaallamo xaaladdan. Taasna waxaa ku jira kororka kolestaroolka HDL ama heerarka kolestaroolka wanaagsan, iyo sidoo kale waxtarkiisa.
Waxay ka difaacdaa kansarka
Waxaa jira hay'ad ballaaran oo cilmi baaris ah oo isku xireysa isticmaalka khamriga cas iyo ka hortagga kansarka. Waad ku mahadsan tahay wada shaqeynta taxane ah antioxidants ku jira halabuurkeeda, khamriga cas ma aha oo kaliya inuu yareeyo halista cudurka wadnaha, laakiin sidoo kale waxay kaa caawin laheyd gaabinta koritaanka unugyada noocyada kala duwan ee kansarka, oo ay kujiraan kuwa qanjirka 'prostate', beerka iyo afka. Furaha ayaa ku jira maqaarka canabka loo isticmaalo soo saarista khamriga cas.
Waxaa jira daraasado xitaa taas xaqiijiyay ragga cabba ugu yaraan afar koob oo khamri casaanka ah usbuucii aad ayey ugu yar tahay inuu ku dhaco kansarka qanjirka 'prostate' kuwa aan ahayn. Waa in la ogaadaa in faa iidadan xiisaha leh ee laga qabo aragtida labka ah aysan u sii dheerayn cabbitaannada kale ee aalkolada leh, sida biirka ama ruuxa, xitaa khamriga cad, laakiin waxay u gaar tahay khamriga cas.
Cabitaanka khamri casaanka mararka qaarkood way awoodaa wanaajinta niyadda iyo yareynta halista niyad-jabka. Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusto in ku xadgudubkeeda ay yeelan karto saameyn ka soo horjeedda, markaa iska hubi inaad si dhexdhexaad ah ugu isticmaashay.
Cab dhexdhexaad ah
Xusuusnow in kasta oo cabitaanka khamri cas ay ku siin karto faa'iidooyin caafimaad oo weyn, Isticmaalka xad-dhaafka ah ee cabitaan khamri ah (oo ay ku jiraan khamriga, dabiici ahaan) waxay aad u dhaawaceysaa caafimaadka. Ku xadgudubka khamrigu wuxuu u horseedi karaa cudurka beerka. Sidoo kale waa inaan ilaawin lammaanaha xun ee ay ku sameyso gawaarida, iskudhafkan ayaa sabab u ah dhimashooyin badan oo wadada ah oo laga hortagi lahaa.
Sidaa awgeed, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka khamriga casaanka ah si ammaan ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad ku dhowaato isticmaalkiisa si dhexdhexaad ah. Iyo, intaad cabto xoogaa cabitaan ah usbuucii waxay dheereyn kartaa noloshaada, inaad si xad dhaaf ah u sameyso waxay leedahay uun saameyn lid ku ah. Xadka waxaa sida caadiga ah dejiya khubaradu laba koob oo khamri ah maalintii. Inaad dhaafto xadkaas waxay dhaawici kartaa caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan go'aansan qadarka khamriga maalintii, waxaa fiican inaad la tashato dhakhtarkaaga. Xaaladaha qaarkood, lacagtaas waxaa loo qaadan karaa inay aad u sarreyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka khamriga cas
Cadar cadarka ragga oo gabdhuhu aad u jecelyihiin